ရွှေစျေးပေါသတ္တု detectors အ (MS-9020C) China Manufacturer
ဖေါ်ပြချက်:နက်ရှိုင်းသောရွှေသတ္တု Detector,အနက်ရှိုင်းဆုံး Vlf သတ္တု Detector,မြေပြင်ရွှေ Detector
Home > ထုတ်ကုန်များ > မြေအောက်သတ္တု Detector > ရွှေသတ္တု Detector > ရွှေစျေးပေါသတ္တု detectors အ (MS-9020C)
ရွှေစျေးပေါသတ္တု detectors အ (MS-9020C)
MD-9020C LCD ကိုမြေအောက်သတ္တု Detector တစ်မူပိုင် LCD display ကိုနည်းပညာပိုင်ဆိုင်သည်။ ဒါဟာတိကျပစ်မှတ်လုပျနိုငျတဲ့ item ကိုဖျောထုနှင့် mode ကိုဖော်ထုတ်မယ်ညှိ။ ဒါဟာလူများအတွက်စုံလင်လိုအပ်သောပစ္စည်းကိရိယာများဘဏ္ဍာကိုမုဆိုးဝါသနာအဆင့်မြှင့်ထားပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်သတ္တု detector .. ၎င်း၏ LCD display ကိုညအချိန်တွင်သတ္တု detect လုပ်ဖို့အသုံးပြုသူကိုကူညီနိုငျပြင်ပတွင်စွန့်စားမှု, relique ထောက်လှမ်းစသည်တို့လုပ်ဖို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ ဒီအစွမ်းထက်နှင့်စွယ်စုံစက်ကိရိယာနှင့်, သင်ရုံဘယ်နေရာမှာမဆိုနှင့် ပတ်သက်. ဒင်္ဂါးပြား, ရှေးဟောင်းပစ္စည်း, လက်ဝတ်ရတနာ, ရွှေ, ငွေအဘို့လိုက်ရှာနိုင်ပါတယ်။ အများဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ရယူရန်, detector စွယ်စုံနဲ့ LCD နှင့်အတူသုံးစွဲဖို့လွယ်ကူပါတယ်။ မြေအောက် detector စက်, ရွှေများအတွက်စျေးပေါသတ္တု detectors အ။ S က uper ကင်နာလက်ကိုင်သတ္တု detector ပူရောင်းချလက်ကိုင်သတ္တု detector, အရည်အသွေးမြင့်လက်ကိုင်သတ္တု detector ။
2. ကြိမ်နှုန်း: 7.5 kHz နက်ရှိုင်းသောရွှေသတ္တု detector
10. အရောင်: အဝါရောင် / Black ကမြေပြင်ကိုရွှေ detector
အနက်ရှိုင်းဆုံး vlf သတ္တု detector, လက်ကျင်းပခန္ဓာကိုယ် Scanner, စူပါစကင်နာသတ္တု detector, လက်-ကျင်းပစူပါစကင်နာ။
မြင့်မားသောနည်းပညာသတ္တု detector (MS-9020C) အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
နက်ရှိုင်းသောရွှေသတ္တု Detector အနက်ရှိုင်းဆုံး Vlf သတ္တု Detector မြေပြင်ရွှေ Detector နက်ရှိုင်းသောရတနာ Hunter သတ္တု Detector နက်ရှိုင်းသောရှာရန်ရွှေသတ္တု Detector နက်ရှိုင်းသောရွှေ Detector3ပေနက်ရှိုင်းသောသတ္တု Detector ရိုးရှင်းသောသတ္တု Detector